Puntland oo dayactir ku samaysay maddaarrada waawayn ee Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garoowe. – Radio Daljir
Garoowe, June 22 – Wasaaradda garoomada iyo duulista hawada ee Dawladda Puntland ayaa sheegtay in dayactir lagu sameeyay dhammaan garoomada Puntland. Sidaas waxaa Radio Daljir u sheegtey agaasimaha guud ee wasaaraddaas Faadima Cabdi Madoobe.
Agaasimaha oo maanta wareysi gaar ah siisey idaacadda Daljir ayaa ka xog-warrantay xaaladda ay ku suganyihiin garoomada Puntland, waxay tilmaantay in ay dhismayaal ku dareen qaabkii ay u dhisnaayeen garoomadu, kuwaas oo ay ku tilmaanay iney yihiin garoommo ay dawladda Puntland ku faanikarto xilligaan.
Garoomada ay wasaaraddu dayactirka ku sameysey waxaa kamida kuwa magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo weliba garoonka Gaalkacyo. Faadima Cabdi Madoobe ayaa sheegtey in ay garoomada ka dhisseen dhinacyo badan, sida fariisimada diyaaradaha, nadaafadda, tayeynta shaqaalaha, iyo weliba guryo cusub oo ay ka dhisseen sedexdaas garoon.
Dayactirradaan lagu sameeyey garoomada Puntland ayaa kusoo beegmeyaa xilli dhawaan isbeddel lagu sameeyey maamulka sare ee wasaaradda, sida wasiirka, wasiir-ku xigeenka iyo agaasimaha guud.